📸 Pejy an-tsary 09 Jona 2022.
➡️ Taorian’ny fanendrena an’Andriamatoa BEGARA Etienne ho Talen’ny Fampivoarana ny Famokarana eny anivon’ny Toby (Directeur de la Promotion de la Productivité des Camps Pénaux), dia notontosaina androany 09 Jona 2022 tao amin’ny biraon’Andriamatoa RAKOTOMALALA Aina Tantely, Talen’ny maha olona sy ny famerenana ny voavonja eo anivon’ny fiaraha-monina (Directeur de l’Humanisation de la Détention et de la Préparation à la Réinsertion Sociale) eto Faravohitra ny famindram-pitantanana ny Sampandraharahan’ny Asa, Tombim-pamokarana ary ny Sakafo (Service des Métiers des Camps Pénaux et de l’Alimentation) izay tarihin’Andriamatoa ANDRIANOELIMANANA Ny Aina Mamy. Ka manomboka izao dia hotantanan’ny Fitaleavan’ny Fampivoarana ny Famokarana eny anivon’ny Toby ity Sampandraharaha ity.
Published Date: 8 juin 2022
📸 Pejy an-tsary 08 Jona 2022.
⚖ Fikaonandoham-pirene­na momba ny fananantany.
✅Tontosa anio ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fikaonandoham-pirene­na momba ny fananantany izay hitadiavana vahaolana amin’ireo olana maro mianjady amin’ny vahoaka amin’ny resaka tany.
⭐ Nosokafan’ny Filoham-pirenena , A/toa Andry RAJOELINA ny fotoana ary niaraka nanantontosa sy namolavola ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Ministeran’ny Fanajariana ny tany sy ny Fananantany.
⭕Haharitra hateloana ity fikaonandoham-pirene­na momba ny fananantany ity.